Dagaal khasaaro geystay oo ka socda Degmada Wanlaweyn | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dagaal khasaaro geystay oo ka socda Degmada Wanlaweyn
Dagaal khasaaro geystay oo ka socda Degmada Wanlaweyn
Wararka aan ka heleyno degmada Wanla-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas ka socdo dagaal u dhexeeya Ciidamo kala taacabsan Guddoomiyaha Wanla-weyn iyo ku-xigeenkiisa Arimaha Bulshada degmadaas.
Dagaalkaan ayaa waxaa uu sigaar ah uga socdaa xaaladda lagu magacaabo Muuri ee Wanla-weyn, waxaana dagaalka la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan, sida ay sheegeen dadka deegaanka qaarkood.
Guddoomiyaha Wanla-weyn iyo ku-xigeenkiisa Arimaha Bulshada ayaa la tilmaamay inay isku heystaan awooda dhiinaca Maamulka degmada, waxaana la sheegaya in labada Mas’uul uu ka dhexeeyo khilaaf xoogan.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo Ciidamada ay kala wataan labada Mas’uul.
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose oo ka war helay dagaalka socda ayaa wada dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay Guddoomiyaha Wanla-weyn iyo ku-xigeenkiisa Arimaha Bulshada.
Maqaal horeShirka Madaxda ee Doorashada dalka oo Goor dhow furmay
Maqaal XigaDFS oo ka hadashay heshiiskii xabad joojinta laga gaaray Dagaalkii Gaza